Zec declares Bulawayo ward 28 vacant - NewsDay Zimbabwe
HomeNewsZec declares Bulawayo ward 28 vacant
Zec declares Bulawayo ward 28 vacant
The Zimbabwe Electoral Commission (Zec) has set March 2 as the date for a by-election to select a candidate to replace incumbent Bulawayo’s ward 28 (Cowdray Park) councillor, Happy Ncube, who died last month.
“The nomination court to receive nomination for ward 28 of Bulawayo Municipality shall sit at the offices of the town clerk Municipal Chambers Building, Fife Street Bulawayo,” he said.
He said in Beitbridge ward 15, two candidates, Rabson Mbedzi for Zanu PF and Victor Moyo of MDC Alliance, had been nominated.
Candidates nominated for ward 25 in Matobo are Sibonginkosi Dube of Zanu PF and Elkanah Sibanda of MDC Alliance.
“Polling shall take place on February 23 from 7am to 7pm in the respective wards as more than one candidate was nominated for election to the office of councillor for the said wards,” Silaigwana said.
Previous article‘Paltry gender commission budget hampers research’
Next articleLow-lying Chilonga Bridge claims Chiredzi RDC employee’s life